Ungazikhathalela njani izixhobo zokugcina eziphathwayo? | Amadoda aQinisekileyo
Ungazikhathalela njani izixhobo zokugcina eziphathwayo?
Amadoda aQinisekileyo | | Ukuzonwabisa, Te knoloji
1. Cima izixhobo kakuhle emva kokusetyenziswa
Emva kokuzisebenzisa kwi-PC, kuya kufuneka unqamle ukhetho «Susa ngokukhuselekileyo isixhobo», ebonakala kwibar esezantsi yedesktop. Cofa apho kwaye ulandele amanyathelo. Kuyafana xa ufuna ukususa ikhadi kwikhamera: kuya kufuneka ucime ikhamera ngaphambi kokuba ususe imemori.
2. Ungazigcina njani iinkumbulo zihlala zicocekile
Izihlanganisi ze-USB kufuneka zingabinathuli, kuba kufuneka zigqunywe xa zingasetyenziswa. Sukusebenzisa izinto zokucoca ulwelo ngokuthe ngqo kwisinxibelelanisi, kodwa sebenzisa ii-swabs zomqhaphu ezinezisombululo zokucoca iimonitha okanye izikrini. Gcina iiCD neeDVD kwiibhokisi zazo kwaye ungazibeki enye phezu kwenye.
3. Kuphephe ukuveza izixhobo ukufuma
Yeyona arhente iyingozi yamakhadi kunye neepeni zokuqhuba ngenxa yokuba iidipozithi ezincinci zamanzi amphunga zinokungena kwesi sixhobo kwaye zichaphazele kakhulu iisekethe zayo. Ukubonakaliswa kwimithombo yobushushu ngqo njengesitovu kunye nokukhanya kwelanga kufuneka kuthintelwe: kunokubangela umonakalo ongenakulungiswa.
4. Sukunyanzela oonotsheluza kunye neepen zokuqhuba kwizidibanisi
Zombini i-flash card kunye ne-USB drive yezihlanganisi kufuneka zifakwe kwindawo enye njengoko zingenakulungelelaniswa. Ngenxa yokungxama okanye unxunguphalo, umntu uhlala ehluza isinxibelelanisi xa singena kwindawo engeyiyo. Musa ukubanyanzela ngaphezulu kokudingekayo kuba zombini isixhobo kunye neslot kufuneka yaphule.
5. Ngapha koko, musa ukulibala ukwenza i-backups
Nanini na xa kunokwenzeka kwaye ukunqanda okwenzekayo, kuyacetyiswa ukuba wenze ukhuphelo lwenkcukhacha yolwazi olugcinwe kumakhadi oonotsheluza nakwii-pendrives (ezaziwa njengee-backups). Kuba ngaphaya kwalo lonke ukhathalelo kunye namanyathelo athathiweyo, izixhobo zinokusilela ngenye imini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Ukuzonwabisa » Ungazikhathalela njani izixhobo zokugcina eziphathwayo?
paula umtya sitsho
ulunge kakhulu..uhlaziyo kufuneka lwenze enye ibhiphu kwi-hard drive, ekwayiyunithi yokugcina kwakhona..kususela koku kufuneka isebenze kakhulu kwiindlela zobomi..ukuphucula enye kwakhona ... ebomini njenge umntu oqalayo kwakhona ukuba ngcono ngakumbi kwimisebenzi ebomini yezifundo kunye nemisebenzi yokubuyela kuleyo isebenza njengamava kwaye isebenze ebomini!
buyela le0 iluncedo0 emsebenzini .. njl. Khathalela, mijos, oku kungcono kakhulu kunomsn kunye nejaifais kwaye ii-feisbuks zikhathalele i-mijiticos bye bye bye bye bye bye bye
Phendula Paula Correa
Kuya kufuneka ukuba ubenazo izixhobo zobudoda …………… uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Eli phepha lipholile kakhulu njengoko lisivumela ukuba sifunde ngakumbi
Ungayisusa njani i-hangover?
Ukuzivocavoca ukuthintela iintlungu ezinqeni